Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Hodan Yaasiin Barre oo loo qaaday Isbitaal kuyaala magaalada Brisbane ee dalka Australia
August 22 2017 00:51:02
Hodan Yaasiin Barre oo loo qaaday Isbitaal kuyaala magaalada Brisbane ee dalka Australia
Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hodan Yaasiin Barre , ayaa isku gubtay xero dadka soo galootiga ah lagu hayo oo kutaala Jesiiradda Nauru, kadib markii gabadhan ay dhibsatay kunoolaansiyaha xeradaasi.
Hodan Yaasiin Barre , ayaa isku buuqday kadib markii laga soo celiyay dalka Australia oo xaalad caafimaad loo geeyay, waxa ayna gabadhan go'aansatay in ay isku gubto markii xeradii ay ka tagtay mar kale lagu soo celiyay.
Warbaahinta dalka Australia, ayaa baahiyay Hodan Yaasiin Barre , oo qabta dhaawac culus oo kasoo gaaray gubniin loo qaaday Isbitala weyn oo kuyaala magaaladda Brisbane ee dalka Australia, gabadhan ayaana xaaladeeda wax looga qaban waayay Jaziirada Nauru.
Gabadhan Soomaaliyeed ee is gubtay ayaa noqotay qofkii labaad ee maalmo gudaheeda dab isku qabadsiisa, waxaana maalmo kahor xerada Nauru isku gubay nin isna qaxooti ahaa oo u dhashay Dalka Iiraan xili ay halkaasi booqasho ku tageen saraakiil ka socotay Hay’adda UNHCR.
Xerada kutaala Jaziirada Nauru ayaa Dowlada Australia, waxa ay ku heesaa dad dalkeeda kusoo gala sida sharci darada ah, waxaana dadka kunool xeradaasi sheegeen in dhibaatooyin adag la kulmaan sidoo kale dumarka lagu kufsado.